कार्यालय सहयोगी भएको १४ वर्ष पछि नेपाल सरकारको उपसचिवमा सिफारीस भए पछि गाउँ नै खुसि यस्तो संघर्ष र अनुभब ! | सुदुरपश्चिम खबर
कार्यालय सहयोगी भएको १४ वर्ष पछि उपसचिवमा नाम निकाल्नेको यस्तो संघर्ष र अनुभब
काठमाडौं । दुर्गम पहाडी जिल्ला रोल्पा नगरपालिका ४ तित्रिकोटको बिपन्न परिवारमा जन्मीएका ३३ वर्षिय कमान सिंह थापामगर नेपाल सरकारको उपसचिवमा सिफारीस भए पछि गाउँ नै खुसि भएको छ। २०४५ जेठ २५ मंगलबार गते बुवा आईतवीर थापा र आमा पार्बती थापाको कोखबाट कान्छो छोराका रुपमा जन्मीएका कमानका आमा बुवा दुवैले स्कुलका कक्षा कोठा पस्ने अवसर पाएनन्।
२ भाइ ३ बहिनी मध्येका कान्छो सन्तान उनले जिल्ला बन कार्यालय रोल्पाबाट पियनको जागरि सुरु गरेका थिए। २ कक्षामा पढ्दा बुवा प्यारालाईसिस भएर ओच्छ्यान परेपछि परिवारलाई समस्याको पहाडले थिच्यो। ‘आमाले दुस्ख गरेर पढाउनु भएको हो। घरमा ६ महिना पनि खान पुग्ने सम्पत्ति थिएन। धेरै पटक पढाई छोड्नु पर्ने अबस्था आउँथ्यो।’ कमान विगत सम्झिन्छन् ‘शनिबार दिनभर जंगलमा दाउरा खोजेर बेचेको पैसाले पढे। जति पढे कमाउँदै पढे।’
‘पावर नचल्ने तर क्षमता चल्ने ठाउँ लोकसेवा मात्र थियो त्यतै लागे। २०६६ मा एक नम्बरमा खरिदार सिफारीस भए। त्यो बेला भर्खर १२ सकाएको थिए। जिविस अन्तर्गत करेटी गाविसमा सचिवका रुपमा काम गरे। हैन सकिने रैछ भनेर नायब सुब्बाको परीक्षमा उनी लागे ।
२०६७ मा सुब्बा निस्कीयो। फेरी गाबिस सचिब बने। त्यो बेला राक, तालावाङ, करेटी र लिवाङ गाविसको जिम्मा पाए। जागीर र बिएसँगै पढ्दै गरे। २०६९ मंसिरमा बिए सकियो। त्यहि मंसिरमा अधिकृत जाँच दिए उनले। २०७० मा अफिसरमा नाम निस्कीयो। सुरु पोष्टिङ जिल्ला मालपोत कार्यालय रोल्पाको प्रमुखका रुपमा भयो। पछि दाङको त्रिपुर नगरपालिका, रोल्पा नगरपालिका हुँदै उर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री बर्षमान पुनको प्रमुख नीजि सचिबको जिम्मेवारीमा बसे।’
(खबर सेन्टर बाट साभार)
बैतडीमा भोली नेपाली काङग्रेसका भातृ संस्थाले बिरोध प्रर्दशन गर्दै !
विद्यार्थी बिरामी भएपछि विव्यस अध्यक्षले गरे बचाऔं अभियान शुरू !